Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray caasimada Rwanda ee Kigali si uu uga qayb galo shir madaxeedka Midowga Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo gaaray caasimada Rwanda ee Kigali si uu uga qayb galo shir madaxeedka Midowga Afrika
July 16, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo gaaray caasimada Rwanda ee Kigali. Sawirka: Radio Muqdisho.
Kigali-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Sabti ah gaaray magaalada Kigali ee caasimada dalka Rwanda si uu uga qayb galo shir madaxeedka 27-aad ee Midowga Afrika.
Shir madaxeedka Afrika ayaa si rasmiya u furmi doona beri oo Axad ah, waxaana looga hadli doona arrimo badan oo ay ugu weyntahay xaalada dalka Koonfurta Suudaan.
Xoghayaha Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa ka qayb gali doona shirka Midowga Afrika oo ay isugu imaan doonaan hoggaamiyaal badan oo ka socda qaramada qaarada.
December 29, 2016 Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo Soomaaliya ugu hambalyeeyay dhaarinta baarlamaanka cusub
Garoowe-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa markeedii kowaad dood u qabanaysa musharixiinta madaxweynaha iyadoo ay soo aadantahay doorashada bisha soo socota. Dooda ayaa ka dhici doonta maanta oo Isniin ah caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida qorshuhu yahay. [...]